War-saxaafadeed: DP WORLD oo Kordhisay Adeega Biyaha Berbera |
War-saxaafadeed: DP WORLD oo Kordhisay Adeega Biyaha Berbera
Mashruucu wuxuu ku kordhin doonaa 60 boqolkiiba nidaamka biyo qaybinta deegaanka
Berbera(GNN)-: Shirkadda DP World, ayaa Isniintii daahfurtay xarun cusub oo qaybinta biyaha ah, taas oo kor loogu qaadayo Boqolkiiba Lixdan adeegga biyaha ee Berbera, Somaliland (60%).
Mashruucan oo ay ku baxayso $1 Malyan wuxuu bilaabmay 2018, waxaana ku jira afar ceel biyood, laba barkadood, laba dar biyood, taangi Sagbad ah oo biyo Kaydiye ah, beeb biyood oo dhererkiisu yahay 7.0 km oo ku xidhiidhsan ilaa kaydka biyaha.
Mashruucan, wuxuu ku shaqeeyaa tamarta qoraxda iyo koronto-dhaliyaha, sidoo kale waxaa ka mid ah dhismaha masaajid meel u dhow xarunta qaybinta biyaha.
Waxa loogu talagalay in ay hoos u dhigto biyo yaraanta Berbera iyo in biyo nadiif ah
ah la siiyo dadka deegaanka iyo bulshada reer miyiga ah. Mashruucan wuxuu ka mid yahay istaraatijiyada DP World ee joogtaynta horumarka Somaliland, maaddaama korodhka biyaha ee la filayo loo baahnaan doono iyadoo ay ugu wacan tahay koritaanka Berbera, taas oo dardargelinayso maalgashiga DP World ee dekedda Berbera.
Saddex ceel ayaa lagu wareejiyey Dawladda Hoose ee Berbera, iyada oo ceelka Afraad iyo laba Barkadoodna oo loo qoondeeyey biyo cabitaan oo bilaash ah, oo loogu talagalay bulshada deegaanka iyo xoolahoodaba.
Tan iyo 2017-kii DP World waxa ay kor u qaaday adeegga Dekedda Berbera 70%, waxayna kordhiyeen awoodda waxqabad ee dekedda 50%. Haatan DP World Berbera waxa ay horumarineysaa hal-abuurka maxaliga ah, waxaana tababar gudaha iyo dibadda ahba siisay in ka badan 2700 qof oo reer Somaliland ah sannadkii 2018.
Suhail Al Banna, Madaxa Guud iyo Maamulaha DP ee Bariga Dhexe iyo Afrika, ayaa sheegay: “Taageerada Berbera waa qayb ka mid ah ballanqaadkeena si aan gacan uga geysano horumarinta aagagga aan ka shaqeyno, waxaanan kalsooni ku qabnaa in mashruucani uu faa’iidooyin muhiim ah u leeyahay dad badan oo ku baahsan gobolka. Waxaan ku rejo weynahay in aan wax walba oo aan qabanno ka dhigno mid dadka Somaliland jooga ka dheefaan faa’iido muddo dheer, waxaanan ku niyadsamahay in aan si dhaw ula shaqeyno mas’uuliyiinta Somaliland iyo dadka, si loo hagaajiyo tayada nolosha iyada oo loo marayo kaabayaasha muhiimka ah iyo mashaariicda joogtaynaya horumarka.”
Qorshaha DP World ee Somaliland waxaa ka mid ah kafaala-qaadka 11 dugsi, akadeemiyadda waxbarashada badda, laba cisbitaal, iyo xarun caafimaad. DP World waxa ay 4.5 milyan oo litir oo biyo ah ugu deeqday guddigii taakulaynta abaaraha ee Berbera sanadkii 2017, si loogu gacan-qabto 15,000 oo qoys.